Mune mamiriro emafurati madiki, zvinetswa zvinomuka zvine chekuita nekuiswa kwemidziyo yemumba. Ndosaka zvinhu zvakasiyana siyana zvisina kushandiswa pakubika zvinosanganisirwa mukugadzirwa kwemaseti ekicheni. Kunyanya, kuwacha ...
Nokia C7: hunhu hwenhare uye ongororo
"Nokia C7 00", hunhu hwayo huchaongororwa muchinyorwa chino, inongodaidzwa kuti "Nokia C7" nevashandisi. Iyi smartphone inopihwa nzvimbo yakakosha mumutsara weNokia zvishandiso. Muchokwadi, iyi ndiyo yechipiri smartphone ...
Runhare "Nokia Lumiya 530": wongororo, kutaurwa
Nhare dzeNokia Lumia mutsetse ndedzimwe dzinozivikanwa muRussia. Fans yemagetsi emagetsi kubva kuRussian Federation vanoremekedza chiFinnish (munguva pfupi yapfuura - de jure American - pachokwadi chechibvumirano chinozivikanwa ne ...
Muna 2014, sekureva kwetsika yatove kudiwa nevashandisi vazhinji, zvaive zvichikwanisika kutenga yekrini yekubata smartphone kubva kune anoshanda nemutengo unokwezva. Ino nguva takapihwa iyo MTS 982 modhi.Mutengo wayo ...
"Nokia X6": kutaurwa, kuraira, mifananidzo
Kurarama mune yanhasi nyika, zvakaoma kuzvifungidzira pachako usina chinhu chakajairika senge foni. Tinochida kubasa, kudzidza, kutaurirana nevatinoda, uye kungo zorora. ...
Kubhadhara ne "Ndatenda" mabhonasi kubva kuMTS Sberbank. Maitiro ekubhadhara ne "Ndatenda" mabhonasi kubva kuMTS Sberbank?
Parizvino, sangano reMTS rinoshanda pamwe nemahofisi mazhinji, rimwe rawo iSberbank. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo vane hombe nhamba yevakajairwa masevhisi, semuenzaniso, "Kubhadhara kweMTS nemabhonasi" Ndatenda kubva ...
Fly 4416 foni - zvirevo
Fly nharembozha mamodheru haana kujairika kupfuura mamwe anokwikwidza zvishandiso, asi zvakare ane zvakawanda zvakanaka. Izvo chete zvinokanganisa zveiyi modhi renji chinyararire nzeve. Nekudaro, izvi zvinongoshanda chete ...
Mberi kamera - ndeyei uye mashandisiro ayo?
Nhasi, vagadziri veAppleam vari kuyedza kukunda vamwe nekuwedzera mamojuru uye maficha emahara kune avo madhizaini. Kwemakore anopfuura mashanu, musika wekufambisa unoziva chiitiko chakadai sekamberi kamera. Asati…
Minyuko yekugeza yakanyarara chose: ita sarudzo
Yakaenda kare mazuva ayo maitiro ekuwacha akapa vakadzi vemba dambudziko guru. Hapasisina chero kukosha kwekunyorova machira mahombe uye ma duvet chifukidzo chehusiku, kana kubvarura ganda remaoko ako kusvika paropa ...
Chii chinonzi diode bhiriji?
Chimwe chezvinhu zvekutanga mune zvemagetsi zvemazuva ano diode. Inoshandiswa mumatunhu panodiwa AC kugadzirisa uye inoshandiswa mune ingangoita ese emidziyo yemumba. Unogona kuiwana paTV, ...
Ungasarudza sei piritsi rine kamera yakanaka uye bhatiri (ongororo)
Mhando yezvinhu zvemazuva ano zvemafoni zvakapamhama zvekuti kuita sarudzo, kutaura zvazviri, hakusi nyore. Kune akawanda mamodheru anosiyana pamutengo, mugadziri, hunyanzvi hunhu. Kunyangwe ita ...
Goodline: wongororo. nharembozha
Haisi chakavanzika chinodaidzira kunze kwenyika chinoshandirwa mukufamba nzira. Zvinoreva kuti anonyorera kuti ataure nenhamba yaanoda anoshandisa masevhisi kwete eanoshanda, asi yekambani yekune imwe nyika (kuburikidza ...
Microwave convection: chii ichi? Convection uye Grill Microwave
Kana iwe ukafunga kusarudza kuchinjisa yako yekare microwave ovhoni kune imwe nyowani, ipapo akasiyana mamodheru anokushamisa nhasi. Microwave ovens ine convection parizvino ndiyo yakanyanya kuwanda (ongororo chete nezvayo ...
Smartphone Microsoft Lumia 435: ongorora, yakatarwa uye ongororo
Iyo Lumia 435 inonakidza bhajeti modhi. Ichi ndicho chigadzirwa chekutanga mumazana mana ematanho ekumisikidza tarisiro yevateereri yakasiyana neakawanda emhando dzemhando. Kana iwe uchida smartphone yemwana, backup kana ...
Chii chinonzi GP diode uye chii chinangwa chayo?
Kazhinji, vashandisi vemidziyo yemakomputa vanokanganwa kuti, kusiyana neacoustic zvishandiso, materevhizheni uye zvimwe zvigadzirwa zvemumba, zvinowanzo nyanyisa uye, semhedzisiro, kusashanda uye kunyangwe ...
RS kukonzera. Nheyo yekushanda, dhiramu rinoshanda, tafura yekushandura
Iyo inokonzeresa ndicho chishandiso chakareruka, inova digital automaton. Iine nyika mbiri dzekugadzikana. Imwe yeaya matunhu yakapihwa kukosha "1", uye imwe yacho - "0". Trigger state pamwe neyakaenzana kukosha ...
Ndinofanira kutenga piritsi yeXiaomi? Ongororo uye ongororo yemhando dzakanakisa
Musika wemakomputa emakomputa, semafoni efoni, ari kuchinja zvine simba. Dai nezuro Apple neSamsung vanganzi vatungamiriri vasingarambike veindasitiri, nhasi vamwe vagadziri vari kubata navo. Mumwe wavo…
Maitiro ekuzadza Canon cartridge iwe pachako
Inkjet maprinta ndiwo akanyanya kudhura mhinduro kune dhijitari kuburitsa kubepa. Kune makambani mashoma chete anoita mukugadzira kwakawanda kwemaprinta akadaro. Aya ndiwo Epson, Canon uye HP. Vamwe ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 31,023 masekondi.